Somaliland.Org » Xaaji Cabdi Waraabow adeer, Riyaale hortiina nabadu way jirtey, intuu joogeyna isagaa khatar ku hayey.
OPINIONXaaji Cabdi Waraabow adeer, Riyaale hortiina nabadu way jirtey, intuu joogeyna isagaa khatar ku hayey.
April 27th, 2009 Comments Off Nabadii waxay noqotay shay la isku xuuxiyo. Somaliland waxay gaadhey heer hadii aad gurigaaga ugu soo gasho nin qaawan oo sariirtaadii fadhiya oo aad xukuumadan haatan joogta ama odayaasha dhaqanka u ashkata tagto, in markay arkaan ninkan qaawan ee sariirtaada ku fadhiya, la odhanayo adeer iska aqbal oo u tanaasul nabadaa sidaa ku jirtee. Hadii aad tidhaahdo “waar nabada iyo tanaasulku caynkan kuma jirtane, ninkan guriga iiga soo saara”, waxa la odhanayaa nabada ayaad ka soo hor jeedaa. Markaasaa Madax dhaqameedyo iyo hebelo la soo dhaqdhaqaajinayaa. Nabada “Hebel” ayaa inaga duminana ayay mudo lagu celicelinayaa, boogaa la xoqayaa! Xaalad abuur ayaa la bilaabayaa! Taloba fara ka haadey!
Waqtigii Nebi Maxamed noolaa “Nabad gelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee” ayaa nin Yuhuud ahi laba beelood oo muslimiin ah oo heshiiyey u tiriyey gabayo ay isu tiriyeen waqti ay is dileen islaamka hortii…Qolaba qolada kale hadalkii ay tidhi iyo boogihii buu xoqay, wuxu yidhi reer hebel maalintaa hebel uma aarin. Hebelna hebel hadalkii ku beegnaa ma odhan. Labadii beelood baa dhug isku yidhi oo hubkii boobay. Suubanihii markay arrintii gaadhey, wuxu yidhi, “Waar ma dhaqankii jaahilayada ayaad doonaysaan anigoo idin dhex jooga?” Halkii ayuu suubanuhu dabkii biyo ku shubay. Maanta rag Riyaale ka dhex hadlayo ayaa shacabkeenii tii yuhuudiga u akhiriyaya. Durbaan colaadeed iyo dhiilo’aan damayn oo maalin walbal taagan ayaa la shidaaya. Shacabkuse waa faahim oo waa iska arkaa in afkani yahay kii yuhuudka, naarahana uu afuufayo Riyaale.
Wadankii waxu gacanta u galay casaabad isku xidhan oo la baraystay dhulgariir siyaasadeed oo joogtada ah, dhanka kalena ku dirkriyasa nabda ha inaga duminana. Waar nabada ma ilaahay baad qandaraas kaga soo qaadateen? Nabada ma idinkaa haya? Nabada waxa haya Eebe weyne, shicibkaana ilaashada. Nabada waxa diidan Riyaale oo burburiyey instituionskii dadka u dhexeeyey. Tusaale ahaan:
1. Waxuu kufsaday dhaqankeenii wanaagsanaa, oo madaxdhaqameedyadii ayaa badh noqdeen aalad uu sida qoris-mariska uga dhex oo goor iyo alayl tumaya durbaan xaalad abuur ah oo damqayaa boogo bogasadey oo la ilaabey. Waxa la samaynayaa wax alla wixii uu Riyale ku sii joogi lahaa.
2. Guurtidii wuxu ka dhex samaystay casaabad ay danohooda isku fushadaan, oo waraabaha u ugu yeedhaysa wan, wankana waraabe.
3. Parliament-ku wuxu baas-gareeyey boqolaal shacri oo mid qudha aanu Riyale hirgelin. Hadii Paliment-ku damco inay la xisaabtamaan, waxa loo diraa Cawil, oo inta badan iyagaa